Iziqhushumbisi ezimbini zabetha isixeko saseBeirut – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Iziqhushumbisi ezimbini zabetha isixeko saseBeirut
Ngomhla we-4 ka-Agasti, ngo-2020, i-cache emalunga neetoni ezingama-2750 ze-ammonium nitrate eyayigcinwe ngokungqongqo kwizibuko laseBeirut, iLebhanon yavutha kwaye yaqalisa uqhushumbo olukhulu olwatshabalalisa iindawo ezinkulu zesixeko samandulo.
Iziqhushumbisi ezimbini, okwesibini esikhulu kunesokuqala, zabetha isixeko sase-Beirut ngorhatya lwangoLwesibini, zabulala ubuncinci abantu abayi-154, zonakalisa abantu abangaphezu kwama-5,000 kwaye zabangela umonakalo omkhulu. Bangaphezu kwe-1,000 abantu abalaliswe esibhedlele, kwaye i-120 ibikwimeko emaxongo ngoLwesihlanu, ngokutsho komphathiswa wezempilo waseLebhanon, uHamad Hassan.
Uqhushumbo lwesibini lwabangela imvula enkulu, ebomvu phezulu phezu kwezibuko lesixeko yaye yabangela umothuko owatyhutyha iglasi kangangeekhilomitha ezininzi. Ngaphandle komsebenzi omkhulu wokukhangela, uninzi kusakholelwa ukuba lulahlekile kwisixeko, ikomkhulu laseLebhanon, kunxweme olusempuma lweMeditera.
Njengoko abasemagunyeni bedibanisa into eyenzekayo, nantsi ukujonga into esiyaziyo nesingakwaziyo.
Yintoni eyabangela ukudubula?
Oyena nobangela awukachazwa, kodwa umlilo utshise indawo yokugcina izibuko ngentsimbi yesi-6. Kwabakho iziqhushumbisi ezibini, esinye esincinane esalandelwa kwimizuzwana kamva sisiqhushumbisi esikhulu esatshabalalisa iingxangxasi zesixeko.
Tags: akiraall mightanimeapocalypsearabarabicbakugobakugoubeirutbeyrouthbnhaboku no hero academiaboomcalligraphycedarcitycutedekudubaiegyptemiratesexplosionfairrouzfirefunnyhabibiheroinkosi explosion ukubulalairaqizukujapanjordankacchankatsukikatsuki bakugoukonosubakuwaitlanguageLebhanonmangameguminmhamiddle eastmidoriyamoroccomy hero academianostalgiaqatarquotesredretrosaudi arabiasyriatypographyuaeumculovintage
June 13, 2022 by admin Xhosa - isiXhosa 0
یک جفت انفجار در شهر بیروت رخ داد
Next Awọn bugbamu meji kan lu ilu Beirut
Previous Một cặp vụ nổ tấn công thành phố Beirut